Machechi aKristu muUnited States
Machechi aKristu Munyika Yose
Machechi aKristu Online
Nyora Bhuku reNew Church
Ongorora Chimiro cheChechi yeChechi
Yunivhesiti yeMichigan - Vadzidzi munaKristu
Cross Campus Ministries - Sunset Church yaKristu
Texas A & M University - Aggies KwaKristu
Mukutsvaga Nzira yaIshe
Evhangeri Broadcasting Network
Iko Kudanwa KwechiKristu Testamente Itsva
Zvidzidzo zveAgape zveBhaibheri Online
JM Bhaibheri Rinobatsira
Chikoro cheBhaibheri cheNyika
Mars Hill Book Book
E-Bhaibheri Chikoro Mudzidzisi
Machechi aKristu Njodzi Yokupindura Njodzi
Machechi aKristu Njodzi Yokubatsira Rubatsiro Inc
Njodzi Yenjodzi Mission
Mharidzo nevamwe vaEvangelist
Isu Takagadzira Mazita emachechi
Website Yekugadzira uye Kubata
Mharidzo naSilbano Garcia, II.
Silbano Garcia, II. anoshumira semuevhangeri kumachechi aKristu, uye ndiye muvambi weInternational Ministries. Musi waMay 1, 1995 akashanda pakuendesa yekutanga Indaneti Gateway yemachechi aKristu pasi pose anozivikanwa se Kereke--Christ.org. Ishe amushandisa pakugadza ungano shanu, uye akabhabhatidza 1,526 mweya mumutumbi waJesu Kristu. Mwari chete ndiye anoziva nhamba yemweya yakauya kunaKristu kuburikidza neongororo dzedu dzeBhaibheri dziri paIndaneti uye kufambisa neInternational Ministries. Hama Garcia vava kuzivikanwa seVhangeri reIndaneti uye mapiyona mumunda weEvangelism yeInternet. Akashanda mukubatsira mazana eungano mukushandisa Indaneti semotokari yekupararira kweEvhangeri yaJesu Kristu.
Hama Garcia muKristu anoshingaira uyo ane simba mumharidzo dzake uye mharidzo. Nzira yake yakanaka yeHondo yeEvhangeri inopararira, uye iwe uchakurudzirwa nemuranda uyu waKristu. Mwari akakomborera Hama Garcia nechipo chokukunda vanhu pamusoro pemuviri waJesu Kristu. Akaenda kunzvimbo dzakawanda dzenyika mukuedza kusimbisa Evhangeri yaKristu uye Nyika Evangelism pakati pemakereke. Hama Garcia vanoramba vachishanda semuvhangeri uyo anongofarira chete kuvaka muviri waJesu Kristu Ishe wedu noMuponesi.
Kana iwe usingagoni kuona mhizha pamusoro apa - download pano: MP3
Iva Wakasimba MunaShe!
ani Ndiyo machechi aKristu here?
Chii chikumbiro chakasiyana chechechi yaKristu?
Historical background ye Restoration Movement
Machechi mangani aKristu aripo?
Machechi akabatanidzwa sei?
Machechi aKristu anotungamirirwa sei?
Chechi yaKristu inotenda chii pamusoro peBhaibheri?
Nhengo dzemachechi aKristu anotenda mukuberekwa kwemhandara here?
Ko kereke yaKristu inotenda mukugadziriswa here?
Sei kereke yaKristu inobhabhatidza chete nekunyudzwa?
Kubhabhatidzwa kwecheche kunoshandiswa here?
Vatariri vechechi vanonzwa here kuregerera?
Minyengetero inonyorerwa kuvatsvene here?
Kazhinji chirayiro chaIshe chinodyiwa sei?
Ndeupi rudzi rwemimhanzi inoshandiswa pakunamata?
Ko kereke yaKristu inotenda kudenga negehena here?
Ko kereke yaKristu inotenda mupurigatori here?
Nechechii chechi inochengetedza rubatsiro rwemari?
Chechi yaKristu ine chitendero here?
Munhu anova sei nhengo yekereke yaKristu?
tora In Touch
Ita Kuti Uzive Kwatiri
Rubatsiro: Ungavandudza Sei Chechi yeChechi yeChechi
Rubatsiro: Tingagadzira sei Nhengo yeChechi yeKereke
Copyright © 1995 - 2020 Internet Ministries. Ishumiro yemachechi aKristu. Zvose Zvakachengetedzwa.
Tsimbisa Nhare yeIndaneti *
Tsigira pasiwedhi *
Minda inotarirwa neessterisk (*) inodiwa.